mairie-antananarivo – Fitsidihana ny Boriborintany faha 4 nataon’ny ben’ny tanàna
Fitsidihana ny Boriborintany faha 4 nataon’ny ben’ny tanàna
Nitohy ny fitsidihan’ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana sy ny mpiara-miasa aminy ny boriborintany faha 4. Fokontany maromaro no notsidihana nandritra izany : Anosibe Angarangarana, Mandrangobato II, Anosizato atsinanana, Andavamamba Ambilanibe, Ambohibarikely. Nifanerasera mivantana tamin’ireo mponina ny Ben’ny Tanàna nandritra izany sady nihaino ny fitarainan’izy ireo. Maro ny toerana dibodrano rehefa tonga ny orana noho ny lakandrano tsentsina, ka nojerena ny vahaolana mikasika izany araka izay tratra.
Misy ny lalankely namboarina tao anatin’ny tetik’asan’ny CLD, tao amin’ny fokontany Angarangarana sy Mandrangobato II no efa vita, tsy mahafa-pahasahiranana ny mponina anefa ny asa vita satria mbola ratsy tsy azo aleha eo akaikiny, avy hatrany dia nanapa-kevitra ny ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana fa ho tohizan’ny CUA ny famitàna azy, ka hatomboka amin’ny alatsinainy ny asa. Teo ihany koa ny fijerena ireo mpanasa lamba, omena aron’akanjo sy koveta ary siny izy ireo mba hanalàna fahasahiranana azy.
Nandritra ny fitsidihana ny fokontany Angarangarana dia nojerena ny tanin’ny CUA ao an-toerana izay mampitaraina ny fikambanan’ny tanora mpanao fanatanjahantena fa mitady hisy haka, avy hatrany dia hisy ny dinika hatao hiarahan’ireo mponina sy ny tompon’andraikitra ao amin’ny boriborintany faha 4, hijerena haingana ny tokony hatao mikasika io tany io. Ankoatra izay, nitsidika ny toerana fanaovana fanatanjahantena tao Ambohibarikely CLUB, Ra-maitre, ahitana toerana fanaovana fanatanjahantena na fikotranana maro samy hafa, ny delegasiona notarihan’ny ben’ny Tanàna. Nisy ny fijerena ny hanampiana azy ireo mba tsy hibirioka any amin’ny fidorohana zava-mahadomelina .